Filoha Rajaonarimampianina Hery : Nandray ny filoha lefitra iraisam-pirenena ny Lions Club -
AccueilRaharaham-pirenenaFiloha Rajaonarimampianina Hery : Nandray ny filoha lefitra iraisam-pirenena ny Lions Club
Nandray ny delegasiona avy amin’ny Lions Club iraisam-pirenena notarihan’ny filoha lefitra voalohany, ramatoa Gudrun Yngvadottir, notronon’ny mpikambana amin’ny distrika 403 B2, ny Filoham-pirenena Rajaonarimampianina Hery. Nandritra io fihaonana io, nanome ny mari-pankasitrahana ho an’ny Filohan’ny Repoblika, ny Lions Club iraisam-pirenena ho fanomezam-boninahitra ireo olona izay manampy ity fikambanana ity hahatratra ny tanjony mba hanatsarana ny fiaraha-monina. Ny Lions club izay vonona hanampy an’i Madagasikara amin’ny alalan’ny tetikasa roa, dia ny ady amin’ny hanoanana sy ny homamiadana mahazo ny zaza, amin’ny maha-fikambanana miahy ara-tsosialy azy. Mba hahatratrarana io tanjona io, zava-dehibe ny fiarahamiombon’antoka amin’ny fitondram-panjakana, ity farany izay marihina fa efa manana drafitra maty paika amin’ny ady amin’ny hanoanana. Na dia izany aza anefa, miankina amin’ny toe-draharahan’ny firenena iray ny hanafoanana izany hanoanana izany, araka ny fanamarihan’ny Gudrun Yngvadottir. Ary notohizany hoe, “tetikasa lavitra ezaka io fanafoanana ny hanoanana, fa kosa hisy vokany mivaingana eo amin’ny vahoaka. Amin’izay fotoana izay, tsy hisy intsony ny olona ho fatin’ny hanoanana.”
Eo koa ny tetikasa homamiadana mahazo ny ankizy. Ny Lions club iraisam-pirenena izay efa ny ady aman-taonana amin’ity aretina mikiky mangina ny fiaraha-monina ity. Ho an’i Madagasikara izao fantatra fa misy tranga vaovao 100 hatramin’ny 200 isan-taona. Tranga 3 isan-kerinandro kosa no voalaza fa mandalo eny amin’ny sampan-draharahan’ny fitsaboana homamiadan’ny zaza eny amin’ny HJRA hatramin’ny nisokofan’ny sampan-draharaha. Fantatra ihany koa fa misy karazan’ny roa ny homamiadana mpahazo ny zaza eto amintsika, dia ny « tumeur hepatique » sy « tumeur solide ». Ny fitsaboana azy ireo izay misy karazan’ny telo, araka ny fanazavan’ny lehiben’ny sampan-draharahan’ny fitsaboana homamiadana mahazo ny zaza, Rakotomahefa Mbola, “ny fandraisana an-tanana ny homamiadana, misy ny mila fandidiana, misy ny mila “chimiothérapie” ary misy ny mila ny « radiothérapie ». Eo amin’ny fitsaboana izay hatrany, misy ireo karazana homamiadana ampian’ny ministera ny fanaovana “chimiothérapie” fa misy kosa ireo fianakaviana no miantoka ny rehetra hatrany amin’ny fitiliana.” Araka ny vaovao voaray hatrany, zaza voa teraka hatramin’ny 15 taona no voan’ny homamiadana eto Madagasikara ary miisa 30 izy ireo manaraka fitsaboana eny amin’ny HJRA amin’izao fotoana izao, ka 3 volana ny kely indrindra. Marihina fa misy azo sitranina ny homamiadana fa miankina amin’ny hamafin’ny aretina, hoy hatrany ny fanazavana. Nanolotra sakafo sy boky ho an’ny sampan-draharahan’ny fitsaboana ny homamiadan’ny zaza sy nitsidika ny Lions first sight eny amin’ny hopitaly Hjra, ity filoha lefitra ny Lions club iraisam-pirenena ity, omaly.